Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1319
Edere faịlụ ndị m gbalịrị ibudata na Akụkọ Mbudata m ma anaghị ebudata faịlụ ndị a na kọmputa m.
Enweghị m ike ịkpọtụrụ onye n'ihi na ibe kọntaktị adịghị. Ebee ka faịlụ ndị ahụ dị? A na-akwụ ụgwọ ndebanye aha m nke Jumbo ngwa ngwa mana enweghị m ihe ọ bụla maka ya.
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1321
Ị nwere ozi njehie ma ọ bụ ihe ọ bụla na ihuenyo ozugbo ị pịrị njikọ ahụ iji malite nbudata ahụ?
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1324
Saịtị a nwere nnukwu ara maka ịbụ ndebanye aha na-akwụ ụgwọ. Emechaala m zaa ajụjụ gị, pịa nyefee n'ihi na enyochaghị m CAPTCHA ọ kpochapụrụ ihe m dere. Obi dị m ezigbo ụtọ na edebara aha m naanị ọnwa 3. Agaghị m eji saịtị a ọzọ.
Na agbanyeghị, Mba, Enweghị m njehie ọ bụla na mgbe m kụrụ ọfụma na windo nchekwa windo windo ọzọ na-enye gị ohere ịhọrọ ebe nbudata. Window ahụ dịgidere naanị sekọnd ole na ole wee pụọ n'anya ọ nweghị ihe ọ bụla ebudatara.
Enyere m nchọgharị m ịjụ ebe ebe ị ga-ebudata ma ebe na-anọghị na ya bụ nchekwa nchekwa.
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1325
Ị nwere ike ịga na simviation.com ma budata ihe, ọ bụrụ na nbudata ahụ amaliteghị ma mee ka m mara, ọ ga-enyere m aka ịmata nsogbu gị ma nye gị ngwọta.
Ma ọ bụ, enwere m ike inye gị nkwụghachi zuru ezu, ma ọ bụrụ na afọ anaghị afọ gị.
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1336
Enweghị m ike ịbanye na saịtị ahụ. Ọ na-afọ nke nta ka ọ bụrụ na edeghị m aha. Ejiri m otu nzere m jiri wee banye ebe a.
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1337
Ị na-elele nchekwa nchekwa gị?
Enweghị ihe nbudatara mgbe ndebanye aha Jumbo 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1338
Enwetara m otu okwu ahụ n’oge nke mbụ m nwetara jumbo, ihe m / v gbochiri nbudata ahụ ma enwetaghị m ozi njehie. Gbanyụọ A / V gị ma gbaa nbudata faịlụ / faịlụ ị na-achọ inweta.
Olileanya nke a na-enyere ma Obi ụtọ Flyin :)
Oge ike page: 0.237 sekọnd